Isbarbardhig cabbirka wadamada - Geofumed
Isbarbardhig cabbirka wadamada
Mee, 2019 Cartografia, Geospatial - GIS
Waxaan eegnay bog aad u xiiso badan, oo la yiraahdo tetruesizeof, waxay qaadataa sanado badan shabakada iyo gudaha - si aad uhog-dhexaad ah oo fudud-, isticmaaluhu wuxuu sameyn karaa isbarbardhiga dheeraynta dheeraadka ah ee u dhaxeeya hal ama dhowr waddan.
Waxaan hubnaa in ka dib isticmaalka qalabkan isdhexgalka, waxay awoodi doonaan inay yeeshaan rikoodh wanaagsan oo meel bannaan ah, oo caddeeya sida dalalka qaar aysan sida weyn ugu weyneyn sida muraayadahayaga u rinjiyeynayaan. Sidoo kale, sidee baa loo arki karaa dhinacyo kala duwan? Farqiga muuqaalka ee ka dhexeeya xajmiyada dalalka codsigaani waxay la xiriiraan saadaasha Mercator Transversal Mercator, dalalka ka baxsan Ecuador, ayaa lagu muujiyay in ay kor u qaadaan buunbuunin.
Waxaan isbarbardhigeynaa tusaalayaal tusaale ahaan, oo noqonaya mid xiiso leh. Si aad u isticmaasho codsiga, marka aad soo gashid on website ka browser ah, ka dibna la geeyay view ugu weyn, been in sanduuqa raadinta oo ku yaalla geeska bidix ee sare ee, magaca dalka in la barbar dhigo magacyada -Taliyaha waa luqad Ingiriis-, Greenland ayaa la doortay (1).
Kadib markaad magacaaga ku jirto, silhouette midabaysan ee dalabka dalxiiska (2) ayaa muuqan doona. Later, oo leh cursor waxaad jari kartaa silhouette this, meesha loo baahan yahay, kiiskan, waxaa la dhigay Brazil (3).
Waxaa la arkay, iyadoo saadaashu ay si xun u khafiifisay cabbirka Greenland, taas oo rumaysnayd in ay ka weyn tahay Brazil, tusaale ahaan. Iyadoo qalabkan shabakada ah ee soo horjeeda soo bandhigay gebi ahaanba, xaaladdan oo kale waxay ku dhacdaa Canada, dusha sare ee guud, waxay si siman u siman tahay mid ka mid ah waddamada ku yaal waqooyiga Koonfurta Ameerika.
Mid ka mid ah fursadaha ay bixiyaan qalabkani waa wareegtada silhouettes ee wadamada, iyada oo loo marayo koritaanka dabaysha, taas oo ku taal geeska bidix ee webka. Sidan sidan, silhouettes loo baahan yahay waxaa lagu meeleyn doonaa hab wanaagsan, dusha sare, si loo go'aamiyo haddii ay daboolayso dhammaan farsamada
Hadda, ka dib marka la arko sida uu u shaqeynayo, waxaanu dooranay tusaalayaal qaar, si ay u muujiyaan muuqaal ahaan, sida khiyaamo khariidaduhu u noqon karaan, iyadoo ku xiran qiyaasta sawirka. Sidoo kale maadaama aynu naadir u aragno in la barbardhigo dalalka marka loo eego xaaladaha kala duwan; Tusaale ahaan, SmartCity caan ah oo ka mid ah Singapore oo dhan, kuwaas oo size uu ka mid yahay aagga caasimadda Madrid.
Spain iyo Venezuela
Waxaan bilaabay is barbar lala yaabo u dhaxeeya Spain iyo Venezuela, at jaleecada hore, Spain u muuqataa in ka badan Venezuela. Si kastaba ha ahaatee, markuu arkay sawirka hoos ku qoran, waxaa lagu xusay sida Spain (orange) haboon ahaanba dushiisa of Venezuela (huruud), marka laga reebo Islands Canary ah, taas oo noqon doonta ciidda Peruvian. Haddii aan is barbar aagga guud ee labada farqiga u saar lahaa% 44 ah, in uu yahay, Venezuela ka weyn tahay jeer Spain 1,5.
Ecuador iyo Switzerland
Inta u dhaxaysa Ecuador iyo Switzerland, farqiga u dhexeeya waa mid ballaadhan, aynu aragno laba kiis. In hore (1) waxaa lagu arki karaa sida Ecuador (green) ka badan kordhin in Switzerland (huruud), iyo jasiiradaha sida Galapagos la helay oo ku yaalla lahaa ee Atlantic Ocean Waqooyiga. In kiiska labaad (2), by la barbardhigo, on lid ku ah, waxa aan dhihi karnaa in ugu yaraan 5 mararka qaarkood galaan xuduuda Swiss aagga guud ee Ecuador.
Colombia iyo Boqortooyada Ingiriiska
Tusaale kale waa Colombia iyo Boqortooyada Ingiriiska, kaas oo la arko marka hore kooda sida kuwii hore, waxaad ka odhan kari waayeen in bedka ee UK uu ahaa mid badan, si ay meesha (NL) on maps had iyo jeer mahad Waan ka aragnaa dugsiga.
Xaaladda kowaad, waxaad arki kartaa waxa Colombia (cagaaran), laga yaabo inay ku jirto meelaheeda, aagga oo dhan ee Boqortooyada Ingiriiska (midabka midabka). Si aad u fahamto si ka fiican, waxaannu ka qaadnay dhowr silhouettes ah Boqortooyada Ingiriiska, waxaannu ku dhajinay Colombia, natiijadaasina waxay ahayd in ugu yaraan 4,2 ay ka dhigi karto Jamhuuriyadda Colombia.
Iran iyo Mexico
Xaaladda Iran iyo Mexico, waxay yihiin laba waddan oo isku mid ah, waxayna kudhow yihiin Ecuador, aragti ahaanba waxay u egtahay mid isku mid ah. Sidaa darteed, marka la sameynayo isbarbardhigga, ma jiro farqi weyn oo u dhexeeya labada dhul. Farqiga dulsaarku waa 316.180 km2Maaha wakiil, maadaama ay dhacdo kiisaska hore loo soo bandhigay, inkasta oo kaliya farqiga u dhexeeya saddex meelood meel oo ah aagga Honduras.
Australia iyo Hindiya
Farqiga u dhexeeya Australia iyo India waa 4.525.610 km2, Tilmaamay in uu jiro farqi weyn oo size of dhulka ee labada dal, haddii aan mid ka mid ah gudaha kale ah, waxaa la arkay in dusha sare ee India (buluug) ka dhigan tahay wax yar ka yar 50% of territory Australia (fuchsia) ( 1).
Ugu yaraan 2,2 ayaa mararka qaarkood gali kara Hindida dusha sare ee Australia, sida ku cad shaxanka (2).
Waqooyiga Kuuriya iyo Maraykanka
Waxaan sii wadi in la sameeyo isbarbardhig, haddii ay taasi ku, ay watteen waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Korea (green), iyo qaybta bari ee Maraykanka ee América.Si saaray dushana ee bariga Maraykanka, waxaa iska cad in wadarta Korea dusha sare ee ugu yaraan saddex ka mid ah gobolada North Carolina, South Carolina iyo Virginia.
Waxay ku dhowaaqday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Korea, iyada oo la tixgelinayo dhulka Waqooyiga Ameerika. Haddii aan samayno isbarbardhiga habboon, dhulka Maraykanka wuxuu leeyahay aag 9.526.468 km2, iyo Korea 100.210 km2, taas oo ah, waxaan kaliya ku dabooli karnaa Mareykanka haddii aan 95 ku dhejiyo dusha sare ee Kuuriya.
Vietnam iyo Maraykanka
Vietnam, waa wax yar ka badan ballaaran Korea (xagga sare), isbarbardhigga lagu sameeyo bariga Maraykanka, halkaas oo aad ka arki kartaa in, by ay qaab elongated, ka qayb qaadan karto dhowr dalalka Maraykanka - laga bilaabo Washington, iyada oo loo marayo Oregon, Idaho iyo Nevada si California ah.
Sida xiriirka ka dhexeeya kordhinteeda, waxaan dhihi karnaa, wadarta guud ee Vietnam waa in lagu soo celiyaa ugu yaraan 28, si loo daboolo dhammaanba qaybaha Maraykanka.
Singapore iyo goobaha caasimadda
Ugu dambeyntiina, mid ka mid ah waddamada horay u soo maray kobcinta abysmal, sanadihii la soo dhaafay, ayaa loo aqoonsaday illaa dhowaan sida ugu dhow ee ugu fiican ee caqliga adduunka. Kuwa aan ka warqabin meesha ay joogaan iyo kordhinta, waxay ku taala qaarada Aasiya, waxay leedahay aagga dusha sare ee 721 km2.
Sawiradu waxay muujinayaan isbarbardhigga Singapore oo leh degaannada magaalooyinka ee Mexico (DFN), Bogotá (1) Madrid (2), iyo Caracas (3).
Gaaban, tetruesizeof waa qalab aad u faa'iido leh, fududahay in la isticmaalo, iyo si aan macquul ahayn loo dhexgalo, taas oo noqon karta mid aad u faa'iido leh ujeedooyinka barbaarinta maadooyinka sida joornaalka ama cilmiga bulshada; iyo sidoo kale dhaqanka guud ee dhammaan.
Post Previous«Previous Ku beddel xogta CAD-GIS oo leh GGG ArcGIS Pro
Post Next 2019 Shirka Shirka Shiinaha - Si guul leh ayaa loo qabtaa inta lagu guda jiro Maalinta Shiinaha ee ShiinahaNext »